Tusiyaha Horumarka Dhabta ah ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Nagu saabsan|Tusiyaha Horumarka Dhabta ah ee Gobolka Washington
Koboca dhaqaaluhu waa tiro ka badan uun. Waa maalgashi dadka, qoysaska, ganacsiyada, iyo bulshada kuwaas oo bixiya una istaaga inay ka faa'iideystaan ​​dhammaan badeecadaha iyo adeegyada laga soo saaray gobolka oo dhan.
Tilmaamaha Horumarka Dhabta ah (GPI) wuxuu cabiraa sida ugu wanaagsan ee dhaqaalaheenu uqabto sanad kasta soo saarista guulaha dhaqaale, bulsho iyo deegaan. Iyo, muhiimad ahaan waxay na siineysaa aragti ku saabsan kharashaadka ama qasaaraha la soo maray si gacan looga geysto hagaajinta qorsheynta iyo go'aan gaarista ee ku saabsan siyaasadeena iyo maalgashiga barnaamijyada.
Ganacsigu wuxuu iskaashi la sameeyay aqoonyahannada iyo la-taliyayaasha si loo horumariyo GPI-ga Washington oo ah mashruuc tijaabo ah. Washington waa gobolka saddexaad ee qaata GPI, kana dambeeya Maryland iyo Vermont.
Jaantuska hoose wuxuu muujinayaa sida GPI-ga Washington isbarbar dhigayo cabirka dhaqameed ee Waxsoosaarka Gudaha (GDP). Darawallada waaweyn ama kharashyada ku baxa dhaqaalaha gobolka ee mas'uulka ka ah farqiga sii kordhaya ee u dhexeeya GDP iyo GPI ee bilaabmaya 1985 waxaa u sabab ah kororka sinnaan la'aanta dakhliga, xaalufka kheyraadka tamarta aan la beddeli karin, safarka iyo waqtiga firaaqada oo lumay.
Isbedelka Boqolley ee Washington ee Per Capita GPI iyo GDP, 1960-2015 (2009 $)
Tilmaamayaasha GPI ee Washington
Dhammaan 26 qiyaasta shaqsiyadeed ee ku jira GPI-ga waxaa laga soo qaatay ilaha xogta ee la heli karo.
Kharashyada Isticmaalka Shakhsiyeed
Isticmaalka Shakhsiyeed ee La Habboon
Qiimaha Waara Macaamiisha
Qiimaha Shaqo La'aanta
Maalgalinta Hantida Maaliyadeed
Qiimaha Wasakheynta Biyaha
Qiimaha Wasakheynta Hawada
Qiimaha Wasakheynta Buuqa
Qiimaha Isbedelka Wetland Net
Kharashka Isbedelka Beerta Net
Kharashka Isbedelka Daboolka Kaynta
Qiimaha Isbedelka Cimilada
Qiimaha Dhimista Ozone
Qiimaha Xaalufka Kheyraadka Tamarta Aan Dib Loo Cusboonaysiin karin
Qiimaha Shaqada Guriga
Qiimaha Deganaansho La'aanta
Kharashka Khasaarida Wasakhda Shaqsiyeed
Qiimaha Shaqada Tabaruca
Qiimaha Waqtiga Nasashada Lumay
Qiimaha Tacliinta Sare
Qiimaha Wadooyinka iyo Wadooyinka
Qiimaha Shilalka Baabuurta
Shabakadaha GPI ee la xiriira
Maareeyaha Cilmi-baarista ee Tilmaamaha Horumarka Dhabta ah